Arụmụka: ogige mmanye manye ndị ọrụ mmanye (1900 - 1946); ichu ochichi ichighachi bu igba nke ohu; n'ihi na uzọ nile bu otu
Site na: KongoLisolona: July 4, 2020 00: 20 Enweghị asịsa
Ruo afọ 46, ọkachasị na obodo ndị France na-achị, a manyere ụmụ okorobịa ịrụ ọrụ maka iwu ụzọ ụgbọ oloko, n’ubi na ebe a na-egwupụta akụ̀ ndị ga-eme ka Europe baa ọgaranya. Ezinụlọ nyere otu nwa nwoke ma ọ bụ mgbe ụfọdụ ụmụ nwoke a banyere hel nke weghatara mmadụ 2 na 7.
N'ime afọ ndị ahụ nke ihe a ga-akpọ "Verygba ohu", ụfọdụ masịrị ịkwụ ụgwọ ka ha ghara ịgaba n'ogige ndị a ebe ọrụ aka ruo mgbe ike gwụrụ, ọrịa ma ọ bụ ọnwụ, na puku, puku kwuru puku. “Ugbu a gwa anyị otu anyị nwere ike isi hụ France na ndị France n’anya maka ihe niile ha mere? "
Ọkt31 02: 44